Kacdon wadayaasha Oromada oo boqolaal maxaabiisa kasiidaayay saldhig ay Qabsadeen. | ogaden24
Kacdon wadayaasha Oromada oo boqolaal maxaabiisa kasiidaayay saldhig ay Qabsadeen.
Wararka ka imaanaya dhulka Oromia ayaa sheegaya in kacdoon wadayaal cadhaysan weerareen saldhig ciidan oo kuyaala Gobolka Wolu oo kamida Goobaha Kacdoonka culusi kasocdo.
Kumanaan Kacdoon wadayaal cadhaysan ah ayaa kuyaacay sal dhiga oo ay kuxidhnaayeen shacab badan oo aan waxba Galabsan in muda ahna ciidamada Woyanaha ugu xidh xidhnaa xeradaasi ciidan oo kamida Goobaha dadka ay ku ciqaabaan ciidanka Woyanuhu.
Sida warku sheegayo dadka shacabka ah ee weeraray saldhiga kuyaala Wolu waxaa usuuragashay in ay dagaal mudo socday kadib gacanta ku dhigaan saldhiga ciidanka Booliiska ee magaalada Jifaru, waxaana iska Hor-imaadka Labada dhinac kadhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Warku waxaa uu intaas kudarayaa in kacdoon wadayaasha ay saldhiga kasiidaayeen dad badan oo shacab ah oo loo xidhay kacdoonada dhulka Oromada ka socda darteed, waxayna dadkii maxaabiista ahaa dib lamidoobeen qoysas koodii oo ay in mudo ah kala maqnaayeen.
Maamulka Woyanaha ayaa Todobaadyadii lasoo dhaafay ku andoocanayay inay xakameeyeen kacdoonkii kasocday dhulalka Oroamda iyo Amxarada, balse waxaa sheegashada maamulka meesha kasaaraya xaqiiqada dhabta ah ee laga helayo dadka deegaanka kuwaasi oo si Teel teel ah usoo tabinaya xogaha dhabta ah ee kajirta dhulalkaasi.